Gqoka i-OS H: Inguqulelo entsha kunye nokuphuculwa kwebhetri | I-Androidsis
UGoogle uveza ingxelo entsha ye-Wear OS ngokusemthethweni. Inguqulelo entsha yenkqubo yokusebenza yeewotshi, eza phantsi kwegama lenguqulelo H. Sele iluhlaziyo lwesithathu oluphambili esilufumana kwiiwotshi zale nkqubo yokusebenza, kuba kwiinyanga ezimbalwa ezidlulileyo inguqulelo 2.1 yayo ifikile, njengokuba besesitshilo.
Le nguqulo intsha ye-Wear OS iza nomba ophambili njengobutsha, kwaye ke kukuphuculwa kwebhetri yeewotshi. Ukuba unayo, uya kwazi ukuba kwiimeko ezininzi, Ibhetri ihlala ihlala usuku olunye, ke kuya kufuneka ubize iwotshi yonke imihla, ukuze ukwazi ukuyisebenzisa ngosuku olulandelayo. Kubonakala ngathi uGoogle ufuna ukwazisa utshintsho kule meko.
Ukusukela uninzi lweendaba zokuba le H inguqulelo ye-Wear OS isishiya zihambelana nebhetri yeewotshi. Inyathelo elibalulekileyo lokuphucula ubomi babo obuluncedo kunye nokuzimela. Ke abasebenzisi baqinisekile ukukala olu hlaziyo ngokuqinisekileyo xa ukhutshwa.
Sikuxelela ngakumbi malunga neendaba zokuba olu hlaziyo lutsha lwenkqubo yokusebenza yeewatchwatches lusishiya.
1 Gqoka iindaba ze-OS H
2 Zithini iiwotshi eziya kuba nohlaziyo lwe-Wear OS?
Gqoka iindaba ze-OS H
Lonke utshintsho oluza kufikelela kubasebenzisi ngolu hlaziyo zenzelwe ukwazisa ukuphucula ibhetri yeewotshi zabo. Yeyona nto iphambili kwiGoogle kule meko. Ke ngokungathandabuzekiyo kuya kubakho uphuculo olubonakalayo, ekufuneka lufikelele kuzo zonke iiwotshi ezisebenzisa i-Wear OS njengenkqubo yokusebenza.
Ukuphuculwa kokusebenza kakuhle: Ukuba i-smartwatch ibingasebenzi ngaphezulu kwemizuzu engama-30, inkqubo yokusebenza iya kuyibeka kwimowudi yokulala nzulu, ukuze igcine amandla ebhetri.
Imowudi yokugcina ibhetriUhlaziyo olutsha lwe-Wear OS lusishiya notshintsho kule ndlela. Imowudi yokugcina ibhetri iya kuphuculwa, ukuze wandise ukuzimela kwewotshi. Xa ibhetri ingaphantsi kwe-10%, kuphela lixesha kunye nexesha eliza kubonakala kwiscreen. Olunye ulwazi oluqhele ukuphuma, njengamanyathelo, iikhalori ezitshisiweyo okanye enye idatha emiselwe ngumsebenzisi, iya kususwa. Ke ibhetri encinci ehlala ixesha elide.
Amanyathelo amabini asukileNgoku siza kuba nethuba lokucima iwotshi ngamanyathelo amabini alula. Ukwenza oku, ekuphela kwento ekufuneka siyenzile kukucofa nokubamba iqhosha lamandla. Ukwenza oku imizuzwana eliqela kuya kuzisa ukucima kunye nokukhetha ukuqala kwakhona. Ke kufuneka sikhethe ukhetho olunomdla kuthi kule meko.
Qalisa kwakhona isicelo: Ukuba sitshintsha kwisicelo esinye, xa sibuyela kwesinye, singaqhubeka apho besishiye khona. Ke ngoko, usetyenziso luya kugcina imeko esishiye kuyo, kwaye siyakuqhubeka kwakhona xa singena kwakhona. Oku kuyakunceda ukusebenzisa izixhobo ezimbalwa, njengoko ukuqala isicelo kwakhona kuthetha ukusetyenziswa.
Zithini iiwotshi eziya kuba nohlaziyo lwe-Wear OS?
Umbono kukuba le nguqulo intsha ye-Wear OS Fikelela kubo bonke abasebenzisi ngenkqubo yokusebenza kweewotshi. Nangona kunjalo, kumaxesha angaphambili kuye kwakho iimeko ezizodwa, ezinokuphindwa kule meko. Kodwa uninzi lweewotshi kufuneka lukwazi ukufikelela kuyo, njengemodeli zamva nje zokufika ezivenkileni.
Ukuba kwiwatchwatch yakho, Kuya kuvela ukuba une-Wear OS njengenkqubo yakho yokusebenza, emva koko uya kuba nokufikelela kolu hlaziyo. Yinto onokuyijonga kuseto, uye kwicandelo lenkqubo emva koko kwiinguqulelo. Apho uya kuba nakho ukujonga oku, kodwa ukuba kuyenzeka ukuba une-Android Wear, awuzukufikelela kuhlaziyo. Kulindeleke ukuba ifikelele kubasebenzisi kwezi veki zimbalwa zizayo, nangona ungekho umhla othile.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Tutorials » Iinguqulelo ze-Android » Gqoka i-OS H: Inguqulelo entsha yenkqubo yokusebenza